Cumar C/rashiid oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay xildhibaanada lagu soo doortay Cadaado (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Cumar C/rashiid oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay xildhibaanada lagu soo doortay Cadaado (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa kulan aan caadi ahayn la qaatay xildhibaanada labada Aqal ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Wuxuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ka codsaday xildhibaanadaasi inay taageeraan fikirkiisa siyaasadeed, maadaama uu haatan ka mid yahay mursharixiinta u taagan xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Xildhibaanada kulanka la qaadatay ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, C/raxmaan Odowaa, Cabdi Shire Jaamac Ciyaar-jecel, C/waaxid Cilmi Goonjeex, Axmed Macalin Faqi, waxayna dhamaantood sheegeen inay taageerayaan fikirka siyaasadeed uu wato ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo haatan ka mid ah musharixiinta ugu cad cad ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo hadal kooban ka jeediyay kulankaasi ayaa u hambalyo u diray dhamaan xildhibaanada lasoo doortay, isagoo sidoo kale tilmaamay in dalka uu horumar balaaran gaarsiin doonno hadii uu helo kalsoonida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale, wuxuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ka hadlay howlihii kala duwanaa ee usoo qabsoomay intii uu haayay xilalka qaranka, islamarkaana uu inta harsan horey usii dhameystiri doono, isagoo la-tashi guud iyo aragti mideeysan la sameyn doonno dhinacyada siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa kulan noocan oo kale ah hore lasoo qaatay xildhibaanada labada Aqal ee lagu soo kala doortay magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo ee maamulada Puntland iyo Jubbaland.